M4A illaa MP3 Beddelka - Hababka khadka tooska ah iyo qad la'aanta - Softwares
Muusiggu waa mid ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in badan oo naga mid ah. Waxaan ku raaxeystaa dhageysiga heesaha sababo kala duwan awgood. Waxaa jira aalado badan oo naloo heli karo kuwaas oo awood u leh inay soo daayaan muusikada. Qalab yar ayaan awoodin inay taageeraan qaabab yar. Foomka m4a wuxuu noqonayaa mid duugoobay maalin kasta. Waxaa jira ciyaartoy warbaahineed oo aad u yar oo taageera qaabkan feylka maqalka ah. Waxay caan ku tahay abuurista. Tilmaamahan, waxaan ku tusi doonaa sida loogu beddelo m4a faylasha mp3. Waxay noqoneysaa heer warshadeed. Qaabka feylka waxaa si fudud u taageeraya tan tan oo isticmaaleyaal ah.
Waxaa jira tan oo habab kala duwan ah si loogu badalo faylashaada. Waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo bandhigno dhammaantood tilmaamahan. Waxaad u adeegsan kartaa aaladaha qadka iyo khadka tooska ah sida ku habboon. Nidaamka lagama maarmaanka u ah beddelaadku waa isku mid qof walba. Waa kuwan xulashooyinka ugu sarreeya ee aad uga faa'iideysan karto baahiyahaaga.
Waxaa jira tan oo boggag internet ah oo bixiya beddelaad bilaash ah. Waad u adeegsan kartaa si aad ugu beddesho feylashaada ilbiriqsiyo gudahood si fudud. M4a ama feylasha maqalka badanaa wey yar yihiin cabirkooda marka loo eego dukumiintiyada kale. Qalab khadka tooska ah ayaa si dhakhso leh kuu awoodsiin doona inaad u beddesho iyaga oo aan wax lacag ah lagaa qaadin Waa kuwan tallaabooyinka iyo xulashooyinka sare ee isku mid ah.
U Beddelo Youtube qaab Mp3
1. Beddelaha khadka tooska ah
Qaybtaan, waxaan ka faa'iideysan doonnaa websaydhka beddelaha internetka. Waxay naga caawin doontaa si weyn. Isticmaalayaashu way raaci karaan kuwan si ay u bilaabaan beddelashada faylasha codka.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad booqato websaydhka. Waxaad ku bilaabi kartaa adigoo gujinaya tan isku xidhka . Websaydhku wuxuu kuu hayaa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah inaad si toos ah ugu beddelato dukumenti kasta
Isticmaalayaashu waa inay ka helaan fayl m4a kombiyuutarkooda. Dhagsii badhanka xulashada faylka si aad dukumintigaaga u xajiso. Fadlan ka xusho galkaaga fayllada.
Websaydhka beddelaha internetka ayaa kuu oggolaanaya inaad beddesho faylasha oo aad ka shaqeyso tayada maqalka. Isticmaalayaashu waxay wax ka beddeli karaan cabirka faylashooda maqalka ah. Waxaa jira fursado kala duwan oo laga heli karo barxadda. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho xulashada 320 Kbps. Waxay ku siinaysaa adiga tayada ugu wanaagsan ee maqalka oo dhan.
Talaabada ugu dambeysa waa inaad gujisaa badhanka badalashada. Isticmaalayaasha ayaa markaa si fudud ugu soo dejisan kara faylka kombiyuutarkooda. Waa nidaam toosan oo aan qaadanaynin waqtigaaga badan.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka faa'iideysan karto hagahan si aad ugu dhejiso feylasha maqalka qalabkaaga si fudud. Tijaabi tan maanta oo hel khibrad cajiib ah.
Waxaa jira habab kale oo dhowr ah oo kaa caawin doona inaad ka baxdo. Waxaan ku dareynaa liiska si aad ugu raaxeysan kartid feylasha. Waa kuwan websaydhada xulashada sare leh.
Zamzar waa fududahay in la isticmaalo websaydh kaas oo bixiya faa'iidooyinka beddelaadda faylka. Waa goobta ugu fiican ee wax looga beddelo internetka. Waxaan kugula talineynaa dhammaan akhristayaashayada. Waxaad si fudud ugu dari kartaa feylasha goobta kadibna bilaabi kartaa howsha beddelka. Waxaa jira xayiraad kooban oo ku saabsan cabirka faylka ee codkaaga. Websaydhku wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala kaliya inay helaan faylalka 50MB.
Way fududahay in la isticmaalo oo waxay la timaadaa interface interface aad u fiican. Hawsha beddelka sidoo kale waa deg deg. Inta badan feylasha maqalka ayaa ka yar xadidnaanta goobta. Waxay ku habboon tahay isticmaalkaaga.
2. La beddelay
Websaydhka 'convertio' sidoo kale wuxuu aad ula mid yahay xulashooyinka kale ee laga heli karo halkan. Waa degel websaydh kaa caawinaya beddelaadda wax kasta iyo wax kasta. Websaydhku wuxuu awood kuu siinayaa inaad xoqdo goobaha. Waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa doonaya inay hagaajiyaan guryaha dhawaaqa. Qaabka M4A waa qaab maqal ah oo la cadaadiyo.
Isticmaalayaasha ayaa beddeli kara bateetarka, kanaalada maqalka, iyo heerka is bedbedelka / joogtada ah. Xiriirka isticmaalaha sidoo kale waa mid waxtar u leh isticmaalayaasha. Iskuday maanta si aad uhesho khibrad weyn.
Websaydhku wuxuu u heellan yahay dadka u baahan in laga caawiyo beddelidda maqalka. Halkaa ayey ugu jirtaa hawsha gaarka ah ee m4a illaa mp3 beddelaadda. Waa mid tayo sare leh oo aan khaladaad badan keenin. Waxay sidoo kale waxtar leedahay u beddelashada barnaamijyada kale ee maqalka ah.
Waad tijaabin kartaa maanta oo aad ka heli kartaa khibrad weyn. Waxay u shaqaysaa si aad u wanaagsan oo loogu talagalay beddelaadda faylka muusikada.
Qaabka Qalab Beddelka Qadka la'aan:
Qalab badan oo softiweer ah ayaa kaa caawinaya sixitaanka maqalka. Kuwani sidoo kale waxay ku habboon yihiin u beddelashada qaabka codka qalabkaaga. Waa kuwan tallaabooyinka aad isku dayi karto inaad u beddesho faylasha m4a illaa mp3.
Audacity waa mid ka mid ah software-ka tafatirka maqalka ee awooda badan ee laga helo internetka. Gabi ahaanba waa bilaash in loo isticmaalo qof walba. Isticmaalayaashu way tijaabin karaan waxayna sahamin karaan xulashooyinka hadda. Waxaad booqan kartaa xiriirka soo socda - https://www.audacityteam.org/download/ . Software-ka wuxuu ku shaqeeyaa Windows, macOS, iyo aaladaha Linux sidoo kale.
Isticmaalayaashu waxay u baahan yihiin FFmpeg plugin si ay ugu beddelaan feylasha qaabka m4a illaa mp3. Waa baahi loo qabo dhammaan dadka isticmaala kalsoonida. Waxaad ka heli kartaa qalabka maktabadda halkan .Waa nidaam rakibid fudud. Waxay u shaqaysaa qalabka macOS iyo Linux sidoo.Audacity si toos ah uma taageeri karto faylasha m4a. Waa sababta aan ugu baahanahay qalabka FFmpeg.
Isticmaalayaashu waxay furi karaan feylka M4A waxayna si fudud ugu beddelan karaan qaab ad-adeyg ahaan. Waad ku sameyn kartaa wax ka beddelid maqalka adoo adeegsanaya softiweerka.
Isticmaalayaasha waa inay aadaan menu-ka Faylka. Halkan waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarka dhoofinta si loogu beddelo feylka qaab mp3 qaab fudud. Waxaad dooran kartaa galka kaydinta faylka kombiyuutarkaaga. Way kufiican tahay kuwa doonaya inay keydiyaan waxyaabaha.
Voila! Hadda waxaad si fudud ugu rogi kartaa faylasha adoo adeegsanaya aaladdaada xitaa markaad khadka ka maqan tahay.
Qaabka feylka m4a ayaa kufiican kuwa doonaya inay yareeyaan cabirka faylka. Si fiican ugama shaqeyso aalado badan oo maqal ah. Tilmaamahan, waxaan soo bandhigeynaa sida loogu badalo feylasha m4a qaab mp3 qaab fudud. Iskuday maanta si aad uhesho muusig cajiib ah iyo maqal.
Goobaha Muusikada ee aan xirnayn 2020
10+ Adeegyada Daawada TV-ga ugufiican
WhatsApp vs Signal - Midkee mudan?
PS5 vs Xbox Series X - Console-ka Ciyaarahee Ugu Fiican?
sida loo badalo songs ka youtube
netflix wada sheekeysi toos ah oo aan shaqeynin
ka daawan filimada khadka tooska ah bilaash diiwaangelin la'aan
youtube ilaa m, p3
ka daawan filimada qaawan oo buuxa khadka tooska ah bilaash
amazon caddayn ardayga diiwaangelinta Ra'iisul